Uthini umbala omhlophe wokungcola kumdala? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Ithetha ntoni imibala emhlophe yamanyusi emntwini omkhulu?
Kuthekani ngombala omhlophe wezitayile? Ewe, ukuba umntu uneengxaki zesibindi. Oku kwenzeka xa umntu ene-hepatitis okanye, njengoko bambiza ngokuba yi-jaundice. Ngesi sifo, ukuhamba kwe-bile ungene emathunjini kuyekwe.
Isibindi kufuneka sihlolwe kwaye sihlolwe.
Ngokwe-physiology yomzimba (njengoko ndifundile kugqirha wezingane xa intombi yam yayineengxaki), umbala wento yomntu kufuneka uhambelane nemibala ye-gamma edliweyo kwaye yayingumndilili omdaka ngombala omdaka, ukuba ukukhanya kakhulu okanye kunye necacassics emhlophe kuthetha ingxaki nesibindi okanye isisu.
Amantshontsho amhlophe Ndingatsho kakhulu, umbala omhlophe wezinto ezingamanyani awunyanzelekanga ukuba uthathwe sisifo esithile, mhlawumbi usiya kumayeza athatyathiweyo, umbala wamalahle uyaguquka ube ukukhanya.
Ukuba, nangona kunjalo, ayisiyonyango, ke ngamayeza amhlophe amdaka iimpawu ezithile zinokubakhona:
1.Ubuhlungu esiswini, kwi-hypochondrium elungileyo.
2.Ulusu kunye nemhlophe yamehlo ngatyheli.
3.Ukucaphuka, ukugabha, ukuphelelwa ngumdla.
Ukuba kukho iimpawu ezinjalo, ke oku kubonisa isifo se-biliary tract, pancreas kunye nesibindi.
Kule meko, kuya kufuneka ugqirha ugqirha.
Iingxaki zesibindi! Yintoni engcono ukubonisana nodokotela, umhlophe luphawu lwehepatitis
Ke uneengxaki, okokuqala into nge-bile, isifo samatye umzekelo, kwaye okwesibini, i-subhepatic jaundice, zombini ezi sifo zichaphazeleka kakhulu.
Umntu ngokuzithandela okanye ngokuzithandela utsala ingqalelo kwinto yokuba u-qu; kuphuma; Ke, kunokubakho izizathu ezahlukeneyo zokubonakala kwamachaphaza amhlophe emntwini omdala:
-ukutya ukutya okunamafutha amaninzi,
Umbala omhlophe wamanzi amdaka kwimeko yesifo, amaxesha amaninzi, ubonakalisa ukuba i-bile ayingeni mathumbu ivela gallbladder. Izizathu zokunqongophala kokuhamba kwe-bile emathunjini yile:
Izifo zesisu, hepatitis, cholecestitis, cholangitis,
ukugoba gallbladder, dyskinesia yeendlela
-e-gallstones okanye ukudumba okuthintela ukuphuma.
Amantshontsho amhlophe ahlala ekhombisa iingxaki zesibindi. Kwaye ukuchaneka ngakumbi, ukungabikho kwenye ye-bile pigments ebizwa ngokuba yi-bilirubin. I-Bilirubin yenziwa kukufa kweeseli ezibomvu zegazi xa kulungiswa ihemoglobin.
Oku kubizwa ngokuba yingxaki ye-bilirubin. Ebantwini, amantshontsho amhlophe anokuthi abekho ngenxa yokwaphulwa kokuhamba kwe-bile ukuya emathunjini ngokuthe ngqo gallbladder. Icandelo le-bile libizwa ngokuba yi-bilirubin, kwaye oku, xa kugaya ukutya, kunika umbala we-stool ngombala onsundu.
Kwaye ukuba ukuhamba kwe-bile kuncipha ngesiquphe, okanye kuyeko ngokupheleleyo, ke oku kusenokubangelwa: kukungasebenzi kakuhle kwisifo sehepatitis .. Kananjalo, oku kunokubonakalisa ukungasebenzi kakuhle kwiphecana lokuphefumla, ngesifo se-cholecystitis kunye nesifo se-cholangitis.
Okanye le ducts inokuvaleka kwilitye le-hepatic, kwimeko yesifo se-gallstone ebantwini.
Ngendlela, amayeza nawo anokubangela le ngxaki, enjengee-antibiotics, kunye neparacetamol, kunye ne-ibuprofen kunye ne-aspirin.
Imibuzo ye-61 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,324.